ငရုတ်သီး နှင့် ချိစ် ပါမုန့်ကင် | Wutyee Food House
အမဲကင် ဆူရှီလိပ် »
January 15, 2012 by chowutyee ငရုတ်သီး နှင့် ချိစ် ပါမုန့်ကင်
၁။ ခွက်တစ်ခုထဲတွင် (ကြက်သွန်နီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ချိစ်၊ နံနံပင်) တို့ကို ရောမွှေလိုက်ပါ။
၂။ ပြီမှ ပါမုန့် တစ်ချက်ခြင်းပေါ်တွင် ရောမွှေထားသည်များကို ပုံတွင် ပါသည့်အတိုင်း ပါမုန့်ပေါ် တင်လိုက်ပြီ အပေါ်မှ ချိစ်များ ပြန်ဖြူးပေးပါ။
၃။ ထို့နောက် oven ထဲသို့ ၂၀၀ဒီဂရီဖြင့် ပါမုန့်ကြွပ်ရွပြီ အညှိရောင်သန်းသည်အထိ ဖုတ်ပေးပါ။
၄။ ပါမုန့်အညှိရောင်သန်းလာပြီဆိုလျှင် Oven ထဲမှပြန်ထုတ်ပြီ ပူပူလေး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Posted in အိန္ဒိယ ဟင်းလျာချက်ပြုတ်နည်း | 10 Comments	10 Responses
on January 16, 2012 at 9:54 am | Reply Cho Wut Hmone
it is quite popular breaskfast in uk too…and very yummy one hee …wanna eat now🙂
on January 17, 2012 at 10:00 am | Reply chowutyee
haaa eat it hmone gyi yay! !:)
on January 16, 2012 at 4:27 pm | Reply ခင်ယမုံ
ဒါပေမယ့် ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ နံနံပင်မပါဘူး…
on January 17, 2012 at 10:02 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ မရေ။ Plz try it.. Thanks
on January 17, 2012 at 7:30 am | Reply nandar
ညီမရေ…..အမ အလုပ်အားတဲ့ နေ့ ကြရင်လုပ်စားကြည်မယ်…
on January 17, 2012 at 10:03 am | Reply chowutyee
Ma Nandar, plz try it.. It is easy to make..🙂
on February 19, 2012 at 11:04 am | Reply sithu aung win
on February 21, 2012 at 9:29 am | Reply chowutyee
on February 19, 2012 at 11:11 am | Reply sithu aung win
on May 14, 2012 at 2:08 pm | Reply About: Cho Wut Yee
[…] January 15, 2012 ငရုတ်သီး နှင့် ချိစ် ပါမုန့်ကင် […]